ANTANANARIVO : Mpiasan’ny Banky iray manao antsojay amina mpandraharaha maro
Mampiaka-peo ny mpandraharaha maromaro ao Antsiranana noho ny fomba fiasan’ny mpiasan’ny banky iray aty andrenivohitra. 28 juillet 2017
Tompon’andraikitra misahana ny lafiny fandoavana trosa eo enivon’izany banky izany ity farany.
Raha toa ka anisany tanjona napetraky ny banky rehetra ny fanohanana ny mpandraharaha dia ohatran’ny tsy izay ny zava-misy ao amin’ny banky voalazan’ireto mpandraharaha ireto.
« Miara-miasa amin’ity banky ity izahay an-taonany maro ary ananany trosa izahay, ka aloanay tsikelikely. Iaraha-mahafantatra anefa ny fotoan-tsarotra lalovan’ny Firenena ankehitriny sy ny olana aterak’izay eo amin’ny sehatry ny fandraharahana. Na izany aza miezaka mandoa ny trosan’ity banky ity izahay ary tsy latsaky ny 2/3-n’ny vola tokony haloanay isam-bolana na isan-kerinandro izany.
Na dia eo ny ezaka vitanay izay mbola tsy mitsahatra manenjika anay isan’andro ny vehivavy tompon’ andraikitra eo amin’ny lafiny « contentieux » ity », hoy ireto farany. « Tahaka ny mpangalatra fahitan’ity ramatoa ity anay nefa anisany mampidi-bola amin’ity banky ity izahay », hoy ireo mpandraharaha ireo hatrany. « Tena marina tsy ny tombontsoan’ilay banky no tadiavin’ity tompon’andraikitra ity. Ataon’ity farany ny fomba rehetra mba hahazoany vola avy aty aminay fa tsy manaiky an’izany izahay. Raha manam-bola omena azy izahay tsy aleonay handoavana ny trosan’ny banky isam-bolana na isa-kerinandro ? », hoy ny fanazavana nomen’iray amin’ireto mpandraharaha ireto.
Araka ny fahitan’ireto farany azy tsy fantatry ny Foibem-pitondran’io Banky io ny fanenjehana sy fandrahonana mahazo azy ireo isan’andro, ka manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra ambony. « Mba miezaka mandoa trosa izahay, ka tsy tokony henjehina tahaka an’io izahay », nambaran’ireto mpandraharaha ireto farany.